About Siemens - Company - Myanmar
Myanmar | Burmese
Siemens သည် electrification, automation နှင့် digitalization များကို ဦးတည်သည့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည်။ Siemens သည် ကမ္ဘာ့တစ်လွှား၏ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု နည်းသော၊ အရင်းအမြစ်ချွေတာသော နည်းပညာများကို ထုတ်လုပ်သူများတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၊ ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုစနစ်နှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများ ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် ကုမ္ပဏီက အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေသည်။
Siemens ၂၀၁၇ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်တွင် အဆုံးသတ်သည့် ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Siemens သည် ယူရို ၈၃.၀ ဘီလီယံ ဝင်ငွေရရှိပြီး အသားတင်အမြတ်မှာ ယူရို ၆.၂ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ကမ္ဘာ့တစ်လွှား ဝန်ထမ်းဦးရေမှာ ၃၃၇,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုများ၊ ဝင်ငွေများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
၂၀၁၇ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
Siemens ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍများ
Siemens ၏ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ပြီးပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ၊ ရင့်ကျက်သော အတွေ့အကြုံများ သည် ရေရှည်တည်တံ့သော ကမ္ဘာ့ အနာဂတ်အတွက် ဦးဆောင်နိုင်ရန် အကူအညီ ပေးလျက်ရှိသည်။ အိုင်တီ၊ စက်မှု လုပ်ငန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍများအပါအဝင် Siemens ၏ အောင်မြင်မှုများကို စံပြဖြစ်စေမည့် အဆင့်မြင့် ဖော်ဆောင်မှုများအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ခေါင်းစဉ်ကဏ္ဍ၏ သတင်း၊ ဆန်းစစ်မှု သတင်းနှင့် ကိုးကားချက်များတွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Siemens သည် အရေးပါသော အရာများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပေးသည်။ ဘဝအရည်အသွေး တိုးတက်မှုအတွက် စွန့်ဦးတီထွင်သည်။ သုံးစွဲသူများအတွက်၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်နှင့် လူတိုင်းအတွက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒါသည် ဘဝအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်မြို့တော်သို့ ဦးတည်စေမည့် တည်ဆောက်မှု နည်းပညာ၊ ပို့ဆောင်ချိတ်ဆက်ရေးအစီအမံ မှအစ လုံလောက်ထိရောက်သော ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှု၊ စမတ်ဓာတ်အားလိုင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ များကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ် ပြောင်းလဲခြင်းများသည် အနာဂတ်မြိုတော်များဆီသို့ ဦးဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့တစ်လွှားတွင် စွမ်းအင်လိုအပ်မှု တဟုန်ထိုးတိုးပွားလာခြင်းကြောင့် အနာဂတ်တွင် ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် စွန့်ဦးတီထွင် ဆန်းသစ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
စွန့်ဦးတီထွင် နည်းပညာများနှင့်အတူ Siemens သည် ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်သော၊ ပိုမိုလုံလောက်ထိရောက်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
Siemens သည် ယနေ့တွင်ပင် စီးပွားရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အနာဂတ် မြို့ပြ အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ များတွင် - ထိရောက်လုံလောက်မှု၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် လုံခြုံမှုများအတွက် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိသည်။
Financial Services (ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု)
Financial Services သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွက် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်းတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုများသည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အား တန်ဖိုးဖန်တီးပေးရုံမက ဖောက်သည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ဖန်တီးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၀ ရည်မှန်းချက်သည် Siemens အား အောင်မြင်သော အနာဂတ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
နှစ်ပေါင်း ၁၇၀ ကျော် တစ်လျှောက်လုံးတွင် Siemens သည် ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားက နိုင်ငံများတွင် နာမည်တစ်ခုဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။
Siemens သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဓာတ်အားလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်စနစ်ပြုမှု လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၊ ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှု၊ စမတ်ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်များမှအစ လုံလောက်ထိရောက်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးချကိရိယာများအထိဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးကုသမှုတွင် ဓာတ်မှန်ပုံဖော်မှု၊ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများလည်း ပါဝင်သည်။ ယနေ့တွင် Siemens သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ/ဒေသပေါင်း ၂၀၀ ကျော်၌ ဝန်ထမ်းဦးရေပေါင်း ၃၇၇,၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အားလုံးနီးပါးတွင် Siemens ၏ ရုံးခန်း အဆောက်အအုံများ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆောက်အအုံများ၊ သို့မဟုတ် အရောင်းခန်းမများ ရှိပါသည်။
ကမ္ဘာ့တစ်လွှားရှိ အရေးကြီးဆုံး အခမ်းအနားများတွင် ကျွန်တော်တို့ ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အား လာရောက် တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။
Fairs & Events ပွဲနှင့် အခမ်းအနားများ
Electrification, Automation နှင့် Digitalization system များသည် Siemens ၏ ရေရှည် တိုးတက်မှု ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့သော ကဏ္ဍများ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကဏ္ဍများ၏ ဈေးကွက်အကျိုးအမြတ် အလားအလာ အပြည့်အဝရရှိရေးအတွက် Siemens သည် ဌာနခွဲ ရှစ်ဌာန ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Siemens Healthineers နှင့် Siemens Wind Power တို့မှာ သီးသန့် စီမံခန့်ခွဲသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
BuildingTechnologies (အဆောက်အအုံသုံး နည်းပညာများ)
Building Technologies သည် လုံခြုံသော၊ ဓာတ်အားသုံး စြဲ မှုချွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော အဆောက်အအုံနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေး ဈေးကွက်တွင် ဦးဆောင်နေပါသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သော ဆော့ပ်ဝဲပိုင်းနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍပေါင်းစုံကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် စီးပွားရေးအတွက် တွက်ခြေကိုက်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ နည်းပညာပါသော ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှု များအတွက် ထုတ်ကုန်များ၊ နည်းစနစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးမှုတွင် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုသည်မှာ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ထူးများ၊ စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပဈေးကွက်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိမှုများက ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ကုန်များ၊ နည်းစနစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ကမ္ဘာ့တစ်လွှားမှ သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလိုအပ်မှုနှင့် ဂေဟစနစ် စိန်ခေါ်မှုများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရုံများ အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်နိုင် သည့်အထိ ကူညီပေးပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် အမြင့်ဆုံး ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ပေးနိုင်သော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး လည်ပတ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ဆီနှင့် ဓာတ်ငွေ့၊ စက်ရုံများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်၍ စနစ်ကျသော နည်းပညာများဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်လားခြင်းနှင့် ဈေးကွက်သို့ တင်သွင်းချိန် ပိုမိုမြန်ဆန်လာခြင်းတို့ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
Siemens Healthineers AG တွင် ကမ္ဘာ့တစ်လွှားရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန် ကြိုပမ်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။
Wind Power (လေအားလျှပ်စစ်)
(သီးသန့် စီမံခန့်ခွဲသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း)
Wind Power (လေအားလျှပ်စစ်) သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟာယဖြစ်သော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး မကုန်ခန်းနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော စွမ်းအင် နည်းစနစ်များ ပံ့ပိုးပေးမှုတွင် ဦးဆောင်နေပါသည်။
မဟာဗျူဟာ သုံးသပ်ချက် Our Vision 2020 describes the key factors that are enabling us to lead Siemens intoasuccessful future.
ကုမ္ပဏီ ၂၀၁၈ Siemens company presentation: Discover Siemens asastrong partner and responsible employer.
အမေးအဖြေကဏ္ဍ Answers to frequently asked questions about Siemens